Author Archive | Faaqidaad | Page 47
David Cameron wuxuu Muslimiinta ugu hambalyeeyey Bisha Ramadaan
By Editor on 5. June 2016 World News
Raysal Wasaaraha Dalka Ingiriiska David Cameron ayaa ugu hambalyeeyey Muslimiinta ku nool guud ahaan dunida iyo kuwa ku dhaqan dalkiisa dhalashada bisha Ramadaan. Cameron wuxuu soo hadal qaaday dagaalka sukeeye ee ka socda dalka Suuriya, Isagoo leh waa in laga faa’iideysto bishan oo laga shaqeeyo sidii loo soo afjari lahaa. HOOS KA DAAWO FARIINTA CAMERON. Faaqidaad
Nairobi oo laga taageeray Maamulka Cusub ee Woqooyi Bari
Xaflad aad u balaaran oo ay kasoo qayb galeen Jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Kenya ayaa lagu taageeray Maamulka ku meel gaarka ah ee dhowaan looga dhawaaqay Degmada Xingalool ee Gobolka Sanaag. Xildhibaanad hore Caasha Axmed Cabdalla oo madasha ka hadashay ayaa carabka ku adkaysay in dadkani yihiin dadkii keenay Gobanimadda Soomaaliya. ”12000 wiilna […]
Sababaha ka danbeeya booqashada Erdogan ee Afrika
By Editor on 4. June 2016 World News
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan wuxuu booqasho ku tegey dalalka Bariga Afrika gaar ahaan Soomaaliya, Kiinya iyo Ugandha. Waa markii tobnaad ee uu soo booqdo wadamada Afrika ee ka hooseeya Saxaraha mudo ka yar 18 bilood. Muxuu Erdogan wakhtiga xadigaas le’eg ugu bixiyey Afrika? Turkigu wuxuu ka leeyahay qaarada ujeedooyin ganacsi iyo kuwo siyaasadeed, Waana sababta ku […]
Fursad shaqo oo ka banaan Warsidaha Faaqidaad- Muqdisho
By Editor on 3. June 2016 World News
Warsidaha Faaqidaad waa warbaahin madax banaan oo dhidibada loo taagay sanadkan 2016, Ujeedkayaga ayaa ah in aanu si siman ugu adeegno Bulshada Soomaaliyeed ee ku kala daadsan daafaha dunida iyo kuwa dalka jooga. Mudadii koobnayd ee aanu hawada ku jirnay waxaanu samaynay horumar la taaban karo kaas oo ka badan halkii hiigsigayagu ahaa, Laakiin ma […]
Jarmalka: Orodyahan la mooday is-miidaamiye
By Editor on 2. June 2016 World News
Muddo gaaban ayaa argagax laga dareemay agga Hamm ee magaalada labaad ee ugu weyn dalka Jarmalka ee Hamburg kaddib markii qof gaari kaxeynayay uu bilayska ku war-geliyay qof xiran jaakad u muuqata inay tahay kuwa ay xirtaan dadka is-qarxiya. Wadaha gaariga ayaa bar ay dadweynaha waddada ka gooyaan ku arkay orodyahan xirnaa jaakad kuwa jir-dhiska […]
Qarax ka dhacay Muqdisho wax yar ka hor inta aanu ka degin Erdogan- Video
By Editor on 1. June 2016 FEDERAL GOVERMENT, World News
Rag hubaysan ayaa xoog ku galay Hoteel ku yaala bartamaha Muqdisho, Wararkuna waxay sheegayaan in ugu yaraan 10 qof ay halkaas ku dhinteen. Gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa ayey la beegsadeen albaabka hore ee Hoteel Ambassador ka hor inta aysan rag hubaysani gudaha u daadan, Sida uu sheegay goob jooge ku sugnaa. Saraakiisha Ciidamada iyo Masuuliyiin […]
Wasiir Hadliye oo hadalo is burinaya ka yiri heshiis la sheegay inuu Norway la galay- Video
Wasiirka Arrimaha Dibada Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye Cumar ayaa markii ugu horaysay ka hadlay heshiis la sheegay inuu la galay Dalka Norwey, Kaas oo dhigaya in Soomaali tiro ahaan gaaraysa 500 oo dalkaas qaxooti ahaan u jooga dib loogu celiyo Dalkoodii. Wuxuu beeniyey jiritaanka heshiiskaas mar uu la hadlayey laanta Afka Soomaaliga ee VOA, Isagoo sheegay […]